Fepetra fiovana amin'ny famahanam-bolongana amin'ny fandraharahana | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 11, 2010 Alahady 9 Febroary 2014 Douglas Karr
Betsaka ny tontolon'ny haino aman-jery sosialy no mitsara ny fahombiazan'ny bilaogy amin'ny alàlan'ny fandrefesana toy ny fanehoan-kevitra. Tsia. Tsy misy fifandraisana misy eo amin'ny fahombiazan'ity bilaogy ity sy ny isan'ny fanehoan-kevitra momba azy. Mino aho fa misy fiantraikany amin'ny bilaogy ny fanehoan-kevitra - saingy satria tsy zavatra azonao fehezina mivantana izany dia tsy miraharaha izany aho.
Raha mila fanehoan-kevitra aho dia hanoratra lohateny fanaovana baiting link, atiny mampiady hevitra ary lahatsoratra bilaogy mahatsikaiky. Io indray dia hahavery ny mpihaino ahy ifotony ary hikendry ireo olona diso.
Fepetra fanovana bilaogy telo ataoko:
Fikarohana pejy valin'ny motera fikarohana - Manam-pahaizana maro no mifantoka amin'ny habetsaky ny fivezivezena amin'ny motera azonao… fa tsy hoe ohatrinona ny fivezivezena very. Raha manoratra lohateny post fisaka ianao ary tsy manery ny angon-drakitra ataonao, dia azonao atao ny manao ny tampon'ny laharan'ny milina fikarohana fa mety tsy manindry ny rohinao ny olona. Manorata lohateny fandefasana lahatsoratra izay mamadika ny fifamoivoizana ary miantoka ny famaritana ny meta miaraka aminao amin'ny teny lakile ary antony lehibe tokony hikosehana! mampiasa Google Search Console hamakafaka ireo valiny ireo.
Fiovam-po hiantsoana - Mpitsidika voalohany no miantsona ao amin'ny bilaoginao ary na miala na mitady hanao raharaha miaraka aminao. Manome lalana azy ireo hifaneraserany amin'ny orinasanao ve ianao? Manana endrika fifandraisana sy rohy malaza ve ianao? Fantatra mazava ve ny adiresy sy ny nomeraon-telefaoninao? Manana Calls To Action maharesy lahatra izay tsindry mpitsidika ve ianao?
Fivarotana pejy fitobiana - Rehefa avy manindry ny Call To Action ireo mpitsidika anao, miakatra amin'ny pejy mampiova azy ireo ve izy ireo? Ny lpejy madio ary tsy misy fitetezana, rohy ary atiny hafa tsy ilaina izay tsy mitondra ny varotra?
Ny vinavinanao dia tsy maintsy miova amin'ny dingana tsirairay mba hahafahanao mahazo azy ireo amin'ny maha-mpanjifa anao. Tsy maintsy manintona ny tsindry ataon'izy ireo ianao eo amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERP), tokony hanome azy ireo atiny mifandraika izy ireo hahazoana ny fitokisany ary manery azy ireo handavaka lalindalina kokoa, tsy maintsy manome azy ireo lalana mankany amin'ny firotsahana ianao - toy ny antso an-tariby (CTA) ary tsy maintsy manome azy ireo fitaovana hifandraisany aminao ianao - toy ny pejy fitodiana voavoatra tsara.
famintinana Mampihatra ireo fomba fanao tsara indrindra ireo!
voalohany: Ny valin'ny motera fikarohana an'ny Manisa ROI amin'ny fanaovana bilaogy, Compendium no manana ny toerana faharoa ary voasoratra tsara - azo antoka fa hahasarika fifamoivoizana!
Fanamarihana: ho hitanao fa ny Compendium dia manana valiny faharoa amin'ny fikarohana fa tsy ny valiny voalohany. Raha manana Compendium Blogware any amin'ny faran'ny lohateny ny lohatenin'ny pejy fa tsy ny voalohany, dia nilatsaka ny daty sy ny fampahalalan'ny mpanoratra, ary ny famaritana meta dia manana fiteny mahasarika kokoa, mety ho azony atao aza ny mamoaka ny valiny ambony. (Tsara ny fanombohana ny famaritana meta amin'ny teny lakile, na izany aza!) Ireo fanovana ireo dia mety ho avo roa heny na avo telo heny fiovam-pony avy amin'ity pejy valin'ny motera fikarohana ity.
faharoa: Lahatsoratra fohy fohy izay mitarika ny saina ho roa loharanom-pahalalana fanampiny hikajiana ny Return on Investment. Ity dia lahatsoratra matevina sy misy ifandraisany!
Fanamarihana: Ny fomba iray hanatsarana izany dia mety tamin'ny fanomezana loharano fahatelo - ny tena miantso ny hetsika mankany amin'ny ROI Toolkit.
fahatelo: Ny antso ho amin'ny hetsika dia tena tsara sy mifandraika amin'ny kopian'ny pejy, ary lalana mazava hahitana fampahalalana fanampiny!
fahefatra: Ny pejy fiantsonana dia tsy misy kilema mihitsy - manome votoaty manohana, mahasarika, endrika fohy hanangonana vaovao momba ny fifandraisana ho an'ny ekipa mpivarotra, ary na dia ny fanontaniam-panontaniana sasany aza mba hahazoana fahatsapana ny teti-bolan'ny prospect sy ny fahatsapana fa maika.
Ny ekipa marketing ao amin'ny Compendium dia tsy mampino amin'ny fampiasana tanteraka ny fitaovany manokana. Fantatro fa ny Compendium dia manangona fitarihana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana sy ny bilaogin'izy ireo manokana noho ny loharano hafa. Tsy isalasalana fa noho ny asa mahafinaritra ataon'izy ireo amin'ny fizahan-toetra, fitsapana sy fanatsarana ny làlan'ny fiovam-pony. Vita tsara!
Fampahalalana feno… Manana anjara biriky aho ary nanampy tamin'ny fanombohana Compendium Blogware (soa ihany fa tsy niaraka tamin'izy ireo ny sary famantarana ahy!)
Tags: bilaogin'ny orinasamari-pahaizana momba ny fiovam-pobilaogy orinasa